ch 13 လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 13 လုကာ
13:1 နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ရှိကြ၏, အလွန်အချိန်က, ဂါလိလဲနှင့် ပတ်သက်. အစီရင်ခံခဲ့ကြသူအချို့, သောအသွေးကိုပိလတ်မင်းကသူတို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ရောစပ်.
13:2 ထိုအကိုတုံ့ပြန်, သူတို့ပြောဆို: "ဤသည်ဂါလိလဲရှိသမျှသည်အခြားသောဂါလိလဲလူထက်ပိုပြစ်မှားပါပြီရမည်ဟုသင်ထင်ပါသလား, သူတို့အရမ်းခံစားခဲ့ရသောကြောင့်,?
13:3 အဘယ်သူမျှမ, မင်းကိုပြောမယ်. သို့သော်သင်သည်နောင်တရမဟုတ်လျှင်, သင်တို့ရှိသမျှသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်အလားတူ.
13:4 ထိုအရှိလောင်၏ရဲတိုက်လဲကျသူတို့နှင့်ဦးသေဆုံးသူတို့အားဆယ်ရှစ်ယောက်ဘယ်သူကိုအပေါ်သို့, သင်သည်သူတို့လည်းယေရုရှလင်မြို့၌အသကျရှငျလူအပေါငျးတို့ထကျ သာ. ကွီးလွန်ကျူးခဲ့ကြကြောင်းထင်ပြုမည်?
13:5 အဘယ်သူမျှမ, မင်းကိုပြောမယ်. သို့သော်သင်သည်နောင်တရကြပါဘူးလျှင်, သင်တို့ရှိသမျှသည်အလားတူပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ "
13:6 ထိုမင်းသည်လည်းဤဥပမာကိုပြောပါတယ်: "လူတယောက်သင်္ဘောသဖန်းပင်ရှိခဲ့, မိမိအစပျစ်ဥယျာဉ်၌စိုက်သောခဲ့သည့်. သူကအပေါ်အသီးကိုရှာ လာ. ,, သော်လည်းအဘယ်သူမျှရှာတွေ့.
13:7 ထိုအခါသူသည်စပ​​ျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးဟုပြောသည်: '' ကြှနျုပျသညျ, ဤသုံးပါးနှစ်ပေါင်းငါသည်ဤသင်္ဘောသဖန်းပင်ပေါ်မှာအသီးကိုရှာ လာ. ,, ငါအဘယ်သူမျှမတွေ့ကြပြီ. ထို့ကြောင့်, ဒါကြောင့်ခုတ်လှဲ. အဘယ်ကြောင့်ပင်ထိုပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ရပါ?''
13:8 သို့သော်တုန့်ပြန်, သူ့ကိုအားဆို၏: 'သခင်, ဒါကြောင့်လည်းဒီနှစ်ကြစေ, ငါကပတ်ပတ်လည်ကိုတူးနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်သည့်အချိန်ကာလအတွင်း.
13:9 နှင့်, တကယ်ပါပဲ, အသီးကိုသီးသငျ့သ​​ညျ. သို့သော်လျှင်မ, အနာဂတ်မှာ, သင်ကခုတ်လှဲကြလိမ့်မည်။ ''
13:11 ထိုအခါ, တဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံးအဘို့အားနည်းခြင်းအဖြစ်တစ်ဦးဝိညာဉျကိုသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိ၏. ထိုမိန်းမကျော်ငုံ့ခံခဲ့ရသည်; သူမကမှာအားလုံးအထက်သို့ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ.
13:12 ထိုအခါယရှေုကိုမွငျသောအခါသူမ၏, သူသညျမိမိမှသူမ၏ဟုခေါ်တွင်, သူကမိန်းမအားကဆိုသည်, "အချင်းမိန်းမ, သင်သည်သင်၏အားနည်းခြင်းအဖြစ်ကနေဖြန့်ချိနေကြပါတယ်။ "
13:13 ထိုမင်းသည်သူမ၏အပေါ်၌မိမိလက်ကို တင်., နှင့်ချက်ချင်းသူမဖြောင့်ခဲ့သည်, သူမကဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း.
13:14 ထိုအခါ, ရလဒ်အနေနှင့်, တရားစရပ်၏အုပ်စိုးသောမင်းကိုယရှေုသညျဥပုသ်နေ့၌ပျောက်ကင်းအောင်ကုသခဲ့ကွောငျးအမျက်ထွက်ဖြစ်လာခဲ့သည်, သူကလူအစုအဝေးကလည်း,: "သင်အလုပျလုပျရသောအပေါ်ခြောက်ရက်ပတ်လုံးရှိပါတယ်. ထို့ကြောင့်, လာနှင့်ထိုအပေါ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသခံရ, မဥပုသျနေ့၏နေ့၌။ "
13:15 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏တုန့်ပြန်ဟုလြှောကျ: "သင်လျှို့ဝှက်! သင်တို့အသီးအသီးမ, ဥပုသ်နေ့၌, တင်းကုပ်မှသူ၏နွားကိုသို့မဟုတ်မြည်းကိုလွှတ်ပေးရန်, နှင့်ရေဖို့ကဦးဆောင်?
13:16 သို့ဖြစ်., အာဗြဟံ၏သငျ့သ​​ညျဤသမီးကို, ရာသူ့ကိုစာတန်ကဤတဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံးစွားအဘို့အခညျြနှောငျတျောမူသော, ဥပုသျနေ့၏နေ့၌ဒီအထိန်းလက်မှလွတ်ခြင်းခံရ?"
13:17 ထိုမင်းသည်ဤအရာများကိုအ ဆို. ခဲ့သည်အဖြစ်, အားလုံးသူ့တဘက်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြ. ထိုအရာရာ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်လူများအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုအားဖြင့်ထူးဆန်းသောအမှုကိုပြုခံရခဲ့ကွောငျး.
13:18 ဒါကြောင့်သူကပြောသည်: "ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဆင်တူသည်အဘယ်အရာရန်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိန်းဂဏန်းမှငါကနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရကြလိမ့်မည်?
13:19 ဒါဟာမုန်ညင်းစေ့နှင့်တူ၏, သောယောက်ျားသည်ဥယျာဉ်တော်သို့ဆောင်ယူပြီးလျှင်သွန်းလေ၏. ထိုသို့ကြီးပြင်းလာ, ကကြီးမြတ်သစ်ပင်တပင်ဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လည်းအကိုင်းအခက်များတွင်အိပ်ပျော်။ "
13:20 တဖန်တုံ, ဟုသူကပြောသည်: "ဘာကိန်းဂဏန်းကိုငါဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့နှိုငျးယှဉျရကြလိမ့်မည်?
13:21 ဒါဟာတဆေးနှင့်တူ၏, အရာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဒဏ်ငွေဂျုံစပါးကိုမုန့်ညက်သုံးတင်းတောင်း ယူ. ပုန်း, ဒါကြောင့်လုံးဝတဆေးပါသောခဲ့သည်အထိပါပဲ။ "
13:22 သူသည်ထိုအမြို့နှင့်မြို့များမှတဆင့်ခရီးသွားလာခဲ့ပါတယ်, ယေရုရှလင်မြို့သည်မိမိလမ်းသင်ကြားရေးနှင့်အောင်.
13:23 ထိုအခါတစ်စုံတစ်ဦးကလညျး, "သခင်, သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသူအနည်းငယ်ရှိပါတယ်?"ဒါပေမယ့်သူကလညျး:
13:24 "ကဉျြးတံခါးဝမှတဆင့်ဝင်ရောက်ဖို့ကွိုးစားပါ. အများသောသူတို့က, မင်းကိုပြောမယ်, နိုင်လိမ့်ရိုက်ထည့်ရန်ရှာမည်မဟုတ်.
13:25 ထိုအခါ, မိသားစုကို၏ဖခင်သို့ ဝင်. တံခါးကိုပိတ်ထားကြပါပြီမည်သည့်အခါ, သငျသညျတံခါးနားမှာပြင်ပမှာရပ်တည်ရန်နှင့်ခေါက်မှစတင်မည်, ဟုဆို, 'သခင်, ။ ကျွန်တော်တို့ကိုပွင့်လင်း '' ထိုအတုန့်ပြန်, သူသည်သင်တို့မှဟုဆိုလိမ့်မည်, '' သင်မှရှိရာငါသိကြပါဘူး။ ''
13:26 ထိုအခါသင်ပြောစတင်မည်, '' ငါတို့သည်သင်တို့၏မျက်မှောက်၌စားသောက်, သငျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏လမျးခရီး၌သှနျသငျ။ ''
13:27 ထိုအခါသူသည်သင်တို့မှဟုဆိုလိမ့်မည်: သငျသညျမှရှိရာ '' ငါသိကြပါဘူး. ငါ့ထံမ​​ှထွက်သွား, ဒုစရိုကျအပေါငျးတို့သငျသညျအလုပျသမား!''
13:28 ထိုအရပျထဲမှာ, အဲဒီမှာငိုကြွေးခြင်း, အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာလိမ့်မည်, သင်သည်အာဗြဟံကိုမြင်သောအခါ, နှင့်ဣဇာက်, နှင့်ယာကုပ်, လူအပေါင်းတို့သည်ပရောဖက်တို့, ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌, သေးသင်တို့သည်ပြင်ပမှာနှင်ထုတ်ခံရနေကြတယ်.
13:29 ထိုသူတို့ကအရှေ့ကနေရောက်လာပါလိမ့်မယ်, နှင့်အနောက်နိုင်ငံများ, နှင့်မြောက်ကိုရီးယား, တောင်ပိုင်းနှင့်; ထိုသူတို့သညျဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျော၌စားပွဲ၌လျောင်းလိမ့်မည်.
13:30 ထိုအခါ, နောက်ဆုံးနေသောသူတို့ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်ပထမဦးဆုံးနေသောသူတို့ကိုနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ "
13:31 ထိုနေ့တွင်, ဖာရိရှဲအချို့ချဉ်းကပ်, သူ့ကိုဟု: "ထွက်ခွာမည်, သွားဒီကနေသွားပါ. ဟေရုဒ်မင်းသည်သင်တို့ကိုသတ်ပစ်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသည်။ "
13:32 ထိုသူတို့အားဆို၏: "အဲဒီရှိ fox Go နှင့်ပြောပြပါ: '' ကြှနျုပျသညျ, ငါနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုပွီးမွောကျ, ယနေ့နှင့်နက်ဖြန်နေ့. ထိုအခါသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ငါအဆုံးရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ''
13:33 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, အကြှနျုပျကိုယနေ့နှင့်နက်ဖြန်နေ့နှင့်အောက်ပါနေ့ကလမ်းလျှောက်ဖို့အဘို့လိုအပ်ဖြစ်ပါသည်. ယေရုရှလင်မြို့ကျော်လွန်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရမယ့်ပရောဖကျမကျပါဘူးများအတွက်.
13:34 ယေရုရှလင်မြို့, ယေရုရှလင်မြို့! သငျသညျပရောဖကျအသတ်အံ့သောငှါ, သင်တို့ဆီသို့စေလွှတ်ကြသူနှငျ့သငျကြောကျခဲသောသူတို့အား. Daily သတင်းစာ, ငါသည်စုဝေးသင်၏သားသမီးတို့ကိုစုသိမ်းဖို့လိုခငျြ, သူမ၏အတောင်အောက်၌သူမ၏အသိုက်နှင့်အတူတစ်ဦးသည်ငှက်၏ထုံးစံအတွက်, သင်မူကားဆန္ဒရှိကြဘူး!
13:35 အကယ်, သငျ့အိမျသငျသညျအဘို့လူဆိတ်ညံလျက်ကျန်ကြွင်းရကြလိမ့်မည်. သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သငျသညျကြှနျုပျကိုမွငျရကြမည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်သင်ဆိုဖြစ်ပျက်မှီတိုငျအောငျ: '' မင်္ဂလာရှိ၏ဟုသူသည်သခင်ဘုရား၏နာမ၌ရောက်ရှိလာခဲ့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ''
ဇူလိုင်လ 17, 2019
ဇူလိုင်လ 16, 2019
ဇူလိုင်လ 15, 2019